Ra'iisul Wasaaraha Sweden oo laga helay Covid-19
HomeWararka CaalamkaRa’iisul Wasaaraha Sweden oo laga helay Covid-19
Ra’iisul Wasaaraha Sweden oo laga helay Covid-19
January 14, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Wararka Sweden 0
STOCKHOLM 20200618 Finansminister Magdalena Andersson (S) presenterar den senaste prognosen fˆr den makroekonomiska utvecklingen och de offentliga finanserna, under en presstr‰ff i Rosenbad. Foto: Henrik Montgomery/TT kod 10060
Raiisel wasaare Magdalena Andersson (S) ayaa laga helay covid-19, Sida uu TT u sheegay xoghayaha warfaafinta ee gobolada.
Andersson ayaa la sheegay inay Xaaladeeda tahay mid feecan. Haatan waxayna shaqadeeda Ku gudaneysaa guriga.
Todobaadkan, hogaamiyaha xisbiga Centerpartiet Annie Lööf iyo af hayeenka xisbiga Miljöpartiet Per Bolund ayaa ku dhawaaqay inay qaadeen cudurka covid-19.
Xaalada Corona ee Dalka Sweden ayaa gaartay Halkii ugu Sareesay waxana Dowlada ay sameesay Xayiraado Cusub.